CIN Khabar कोभिड सञ्चार अभियानले जगायो समुदायमा चेतना
शान्ति गुरुङ मंगलबार, फागुन १०, २०७८, ०१:०२:००
इलाम । विशेष त युनिसेफ नेपाल र सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालप्रति म आभार व्यतm गदर्छु ।
समुदायमा गएर कोभिड १९ सम्बन्धी छलफल गरिरहँदा आफूले जानेका कुराहरू सिकाउने मात्र नभएर धेरै कुरा सिक्ने अनि अनुभव बटुल्ने मौका पाएको छु ।
यति मात्र नभएर हामीले प्रसारण गर्दै आएको कार्यक्रम र रिर्पोटहरूमा पनि धेरै सहयोग पुगेको छ ।
यो छलफल मेरो लागि एकदमै नयाँ थियो र छलफल चलाइरहँदा के अनुभव गरेँ भने हामीले स्टुडियोमा नै बसेर उत्पादन गरेको कार्यक्रमभन्दा सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर नै उत्पादन गरिएको कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढी हुँदो रहेछ ।
त्यति मात्र नभएर रेडियो सुन्ने स्रोताहरूको अपनत्व पनि बढेको छ । समुदायस्तरमा गरिएको छलफलले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
कोभिड १९ बारेमा छलफलका लागि गाउँमा जाँदा त्यहाँका नागरिकको अपेक्षा पनि धेरै थिए ।
‘कोरोनाविरुद्धको अतिरिक्त (बुस्टर) खोप भनेको नयाँ खोपको नाम हो ? लगाउँदा असर पो गर्ने हो कि ? कोरोनाविरुद्धको जोन्सन खोप लगाएपछि बच्चा हुदैन रे, सानो बच्चाको आमाले खोप लगाउनु हुदैन रे, कम पावरको खोप आउछ अरे अनि मात्र लगाउने, मास्क नियमित लगाउदा समस्या हुन्छ रे ?’ यस्ता प्रश्न नागरिकको आउने गरेको थियो ।
यस्ता भ्रमात्क सवालको सही जवाफ नै कोभिड सञ्चार कम्युनिटी ग्रुप हो भन्ने मैले बुझेको छु ।
बितेको चारपाँच महिनाको समुदायस्तरको छलफलका आधारमा नै अहिले प्रायः सबैले कोरोना महामारी बारेको भ्रम र वास्तविकताको बारेमा बुझेका छन् र खोप लगाउन उत्साहित देखिएको अवस्था छ ।
कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै देखिएको मानसिक समस्याको बारेमा पनि २ वटा छलफल सन्चालन गरेको थिएँ ।
छलफलमा सहभागीहरू पनि एकदमै खुसी देखिएका थिए ।
मानसिक समस्याको बारेमा खुलेर कोही बोल्न चाहानुहुन्थेन तर आज तपाईँ आउनुभयो हामिले बुझेको कुरा बाँड्न पायौँ भन्ने प्रतिक्रिया थियो ।
कोरोना सङ्क्रमण फैलिएसँगै रोजगारी गुमाउनु परेकोले कोरोना लाग्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताले र धेरै जसो पारिवारिक समस्याको कारणले मानसिक समस्या रहेको स्थानीयबासीको भनाइ थियो ।
छोटो समयका लागि सञ्चालन गरिएको छलफल समग्रमा एकदमै उपलब्धिमूलक भएको छ मेरो लागि ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १०, २०७८, ०१:०२:००
गुरुङ इलामको इलाम एफएममा कार्यरत हुनुहुन्छ ।